Galaxy Watch Active2 N'okpuru Mbipụta Ngwa: Nkọwapụta Ndị Ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Galaxy Watch Active2 N'okpuru Armor Edition: The New Watch Edition
Samsung hapụrụ anyị n'izu a ọgbọ gị nke abụọ Galaxy Watch nọ n'ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụnyaahụ ka e gosipụtara mbipụta pụrụ iche, nke ha gosipụtara na ihe omume Galaxy Note 10. N'okwu a, akara Korea na-ahapụ anyị ihe ngosi Galaxy Watch Act2 na Ngalaba Ngwá Agha. Ọ bụ mbipụta nke emepụtara na mmekorita ya na akara egwuregwu n'okpuru Armor.
The Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition gosipụtara ya dị ka elekere kachasị mma maka egwuregwu, na aesthetic dịtụ iche na ihe anyị hụrụ na ụdị nkịtị. Ọ bụ ezie na ha na-edebe ọtụtụ nkọwa ha kpamkpam n'okwu a.
N'eziokwu, anyị na-ahụ nsụgharị abụọ na nha, nke bụ otu ihe ahụ nke anyị ahụlarị na ụdị kwesịrị ekwesị. Nke mere na onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ nke kacha mma maka otu ha. Nhọrọ abụọ maka elekere a bụ 44 na 40 mm na dayameta, site na ya. Ma ọ bụghị ya, ha dị iche na nha a.
1 Nkọwapụta Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition
Nkọwapụta Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition
Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara ihe nlere a zuru okè nche maka ndị ọzọ ọkachamara ọgba ọsọ na ndị nwere mmasị, ndị na-achọ ime ka ọnọdụ ahụ ha ka mma. Mmekọrịta dị mkpa na ụdị dị mkpa dị ka Under Armor bụ ihe doro anya na enyerela aka ịmepụta Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition. Ya mere, ọ bụ nhọrọ dị mma maka ndị egwuregwu kachasị ahụmahụ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ngosipụta: 1,4 anụ ọhịa ma ọ bụ 1,2 nke anụ ọhịa ahụ Super AMOLED na mkpebi 360 x 360 pixel
Ram: 1,5 GB (Naanị ụdị LTE) - 768 MB na ndị ọzọ
Nchekwa dị n'ime: 4 GB
Njikọta: LTE, WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, Bluetooth 5.0. NFC
Sistemụ nrụọrụ: Tizen
Sensọ: Electrocardiogram, Accelerometer, Barometer, Gyroscope, HR Sensor, Sensor Lighting
Batrị: 340/247 mAh
WPC na-akwụ ụgwọ ụgwọ ikuku
Nguzogide: MIL-STD-810G igbe mgbochi agha, 5 ATM na-eguzogide mmiri
Dakọtara na Samsung, ngwaọrụ gam akporo ndị ọzọ: 5.0 ma ọ bụ karịa, RAM 1.5GB ma ọ bụ karịa
iPhone: iPhone 5 na elu, iOS 9.0 ma ọ bụ karịa
N'okwu a, otu n'ime isi ihe ngosi dị na Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition bụ na onye na-enye ọzụzụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Ka ndị ọrụ wee hụ nzaghachi nlele na ige nti okwu n'oge mgbatị, na-enyere gị aka imeziwanye ijeụkwụ gị, na-ejigide usoro gị, ma na-aga n'okporo ụzọ iji nweta ebumnuche ahụike gị. Na mgbakwunye, elekere a na-agba ndị ọrụ ume isetịpụrụ onwe ha ihe mgbaru ọsọ. Ọ na-enyekwa data na ezigbo oge, iji nye ndụmọdụ maka onye ọrụ ọ bụla.
Ndị ọrụ ga-enwe ike ịmepụta atụmatụ ọzụzụ ahaziri iche ma nweta ndụmọdụ ga-enyere ha aka iru ihe mgbaru ọsọ ha. The Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition gụnyere ọnwa isii n'efu nke MapMyRun Premium, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro. Nke a na-enye nkwado ọzọ maka ọzụzụ. Na mgbakwunye, site na ijikọ na ekwentị, a na-enyekwu data gbasara ọzụzụ ọ bụla ma ọ bụ agbụrụ ọ bụla emerela.
The Galaxy Watch Active2 n'okpuru Armor Edition, abịa na nke fechaa na egwuregwu egwuregwu aluminum. Enwere nhọrọ nha abụọ, 44mm nwere eriri ojii yana 40mm nwere eriri Mod Gray. Ejiri eriri fluoroelastomer (FKM) mepụta eriri abụọ ahụ ma gosipụta atụmatụ iku ume. Yabụ na ọ bụ elekere zuru oke ma a bịa n'egwuregwu.
Ugbu a anyị enweghị ozi ọ bụla gbasara igba egbe ahụ nke ụdị a pụrụ iche nke elekere Samsung. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọ nwere ụbọchị mmalite nke yiri nke ụdị nkịtị, onye atụmatụ ya ga-eme atụmatụ na njedebe nke Septemba. Mana anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ nye anyị ozi ndị ọzọ gbasara nke a maka mmalite ya.
Enweghị data dị na ọnụahịa ahụ nke ga-enwe nsụgharị ya abụọ. Ha dị oke ọnụ karịa ụdị elekere anya, na-ahụ na enwere mgbanwe na ọrụ ndị ọzọ. Mana anyi nwere olile anya inwetakwu ihe omuma banyere ya n’oge na adighi anya. Mgbe enwere, anyị ga-emelite isiokwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Galaxy Watch Active2 N'okpuru Armor Edition: The New Watch Edition
10 dị na Galaxy Note 10 +: Olee otú ha si dị iche
Samsung Galaxy Book S: Laptọọpụ ọhụrụ nke ika ahụ